Class amandla nekusebenta imishini ehhovisi
Class amandla nekusebenta zasehhovisi - ukwehlukaniswa okuyinto eyenza umuntu ukuhlola songa amandla esihamba amadivayisi ngokunikeza ulwazi ngokugcwele ngakho.
Mhlawumbe wonke wazibona izimpawu ahlinzekwa ngumkhiqizi. Zivame elise ohlangothini front zedivayisi. Lona kophawu lesifanele. Lolu lwazi kumele kusetshenziswe uma ufuna ukukhetha ithekhniki enamandla futhi ukonga. Kungenxa yalesi futhi wadala isigaba ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Kodwa indlela yokusebenzisa ulwazi ilebula? Ake sibheke-ke.
Lona umsebenzi kahle elula. Kufanele ukhethe imishini lapho Class A wokugubha, A +, A ++ no +++. Ukuze abale songa amandla, kubalulekile ukuba azihlangani mode zokusebenzela kanye ezithile Ukucaciswa ezifana nalolu hlobo lobuciko.
Ngokwesibonelo, ungase ucabangele amandla ukusetshenziswa ngoba umshini wokuwasha. Indlela ukukwenza? Kuyadingeka ukubala esiphezulu umthwalo nokusetshenziswa kwamandla, okuhambelana ihora lomsebenzi. Uma sicabanga kuhhavini, ukusetshenziswa kukagesi kuzoya amandla ivolumu.
Ukuze asindise ngempumelelo ugesi, kubalulekile ukubhekana ezibekiweko lobuchwepheshe. Ngokwesibonelo, umoya isimo kudingeka ucabangele 3 ongakhetha:
Iziteshi, okuyinto etholakala uhlelo yokuhlukanisa;
ukuba khona noma ukungabi yamanzi Ukupholisa;
Class amandla ngokuwonga zasendlini kanye nemishini ehhovisi eRussia - 7, futhi e-US naseYurophu - 10. Kulezi zibalo, futhi udinga ukuba banake lapho ukhetha yiphi impahla. Zonke amakilasi of energy nekghono abonisiwe ilebula.
Okuhambelana izinhlobo ezahlukene kophawu?
Le ncwadi A, A +, A noma A ++ +++ kubonisa ukuthi ukusetshenziswa kukagesi ingaphansi 45% kunanoma idivayisi ezivamile. Lokhu kwaba ukuqala ibekwe phezu izinga namandla ubuchwepheshe ephumelelayo, elikwaziyo ukukhonza iminyaka engaba ngu-15.
Izinhlamvu B no-C ibonisa inqubo kancane kahle esebenzisa ngu-25% (I-V) kanye 5% (yeC) kagesi esingaphansi inqubo ejwayelekile.
Izinhlamvu D no E zivumelana isilinganiso ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. I ukusetshenziswa kukagesi zizongena ithuluzi okujwayelekile (i-D). Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa esinelebuli E ibusa 10% ngaphezu imishini ezivamile.
I last ekilasini - imishini nokumosha. Amadivayisi ifakwe ilebuli F no-G Uzodla 25% ngaphezu nozakwabo ezivamile.
Lamathebuli nencazelo yawo
Namuhla, lo mkhuba lomcoka kwagezi ubuchwepheshe uthatha udaba ezibangelwa ubuchwepheshe obusha. Lezi amadivayisi ozama ukukwenza ukuze kudla ugesi ngangokusemandleni. Zonke yasendlini futhi ehhovisi imishini yesimanje kudalwa ezisuselwa kulesi ipharamitha. Ngakho-ke kufanele sinake ehhovisi ekilasini kwegezi imishini yasendlini, ngokukhetha imishini.
Njengoba sesibonile ngaphambili, lolu lwazi senziwa ngesimo stickers lapho etafuleni eliqhakazile bonke amagugu. Ngokuvamile, lezo-ke ohlangothini front zedivayisi.
Uma ukukhethwa ubuchwepheshe indlela efanele, kungenzeka ukukhetha imishini ukonga ngaphandle kwezinkinga. Khumbula ukuthi lezizindawo kwenziwa kuwo wonke amadivayisi okufanayo, kodwa kungenzeka ukusetshenziswa amazinga ihluke kancane. Ngakho-ke, uma uthenga kufanele ucabangele ithebula amakilasi of imishini ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo.
Ukumaka e-European Union
ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo amakilasi okudalwe e-European Union. Okusekelwe ekwazisweni kwazo, amanye amazwe aye usuqalile ukuzakhela izilinganiso zabo ngoba ubuchwepheshe. Kodwa akusho ukuthi lokhu kube umgoqo ukusabalala uhlelo European. Manje ungabona kophawu European iningi le ezihlukahlukene zikagesi. Wangena ngesisekelo izifundo we-European Commission for Amandla Ezokuthutha. ERussia nabo wathatha impumelelo eziye zenziwa e-EU.
Onjalo okwenziwa ukusetshenziswa ngempumelelo energy has izici eziningi ezinhle:
abantu ungagcina imali, njengoba lokhu kuzonciphisa izindleko Umbuso indawo;
isimo ungagcina izinsiza kanye nesabelomali;
ngaleyo ndlela kungenzeka ekulondolozeni imvelo;
e inkampani amandla banciphise izindleko zokukhiqiza;
into ebaluleke kakhulu wukuthi ungehlisa nokusetshenziswa kwemithombo yendalo.
Amandla Izisethenziswa ngokuyikho
imishini Amandla esisindisa imakwe Class A akuve kuvamile ukuba emakethe. Lokhu kwaba nomthelela yokuthi ezinye izinkampani zakwamanye amazwe sethule namagama amasha ngoba imishini yayo, ngale ndlela elandelayo: A +, A ++ no +++.
Namuhla, nganoma isiphi ubuchwepheshe izinga ukupholisa kuyabonakala ukuthi abakhiqizi kuvezwa ku ilebula index ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. On lokho kuncike? It ibalwa kusukela isilinganiso iphesenti phakathi ukusetshenziswa of amandla ngonyaka kanye izinga energy ukusetshenziswa for iyunithi ezivamile yohlobo olufanayo.
Ngesikhathi esifanayo, ukubala ukusetshenziswa isilinganiso ugesi, kufanele inake ivolumu kwamakamelo, kanye nezici ezengeziwe: eneqhwa futhi izinga lokushisa nokulawula. Futhi kwilebula ungabona inani lamagumbi ukusebenza.
Amapharamitha ezilandelayo kumele aboniswe kwilebula imbala:
Ukuhlonza amasu, ikhodi ekhethekile kufanele sikhonjiswe.
I energy ukusetshenziswa kwalesi imodeli isikhathi esithile.
Umenzi Kufanele ucacise umthamo linezingxenye lapho izinga lokushisa zokusebenza ingaphezu 6 degrees.
umthamo Isitoreji ezindaweni lapho izinga lokushisa lokusebenza lingaphansi kuka 6 degrees. linezingxenye ezifana nalezi ziyokwenziwa ezinophawu lwenkanyezi.
Yiqiniso, kufanele icaciswe kuhle kwegezi ekilasini.
art umsindo operation.
umshini wokuwasha ungabona izinhlobo ezahlukene kophawu. Okuhambelana ngamunye wabo?
ku "Ukotini degrees 60" Imodi kuze kufinyelele 2010 zisekelwe songa amandla esihamba egeza. Lokhu kufanele kubhekwe uma egcwele ngokugcwele sigubhu. Abakhiqizi kwadingeka ukuba silungise, kungakanani ichithwa ugesi ihora elingu-1 i-ukugeza eyodwa kilogram of izingubo. Futhi, ke kwakudingekile ukuba acabangele ukuthi izinga lokushisa kokuqala degrees 15.
Kamuva kwafika lesi siqondiso, owawuthi kwanqunywa ukuba acabangele ukusetshenziswa wonyaka we ugesi. Kuyadingeka ukuba ukuqapha ukusetshenziswa kwamandla kusebenza, kumodi yokulinda. Energoeffektrivnost kufanele ibalwe ngesisekelo 220 izona ngonyaka. Yiqiniso, kumelwe kwenziwe izinhlobo ezahlukene umthwalo, ie-42% - ugeza uma ithwele umthwalo omningi kanye degrees 60, 29% - imithwalo amancane, kwesigamu okuyinhloso eyenzeka kuwo degrees 60, 29% - imithwalo amancane, kodwa ugeza 40 degrees. Le nqubo, okuyinto Class A, ibusa esingaphansi 340 kWh ngonyaka.
On the ilebula for umshini wokuwasha ngokuvamile esibekiwe:
Njengasendabeni yabase langaphambilini, wophawu esiqokiwe, nekhodi nomkhiqizi ngesimo izinhlamvu nezinombolo ukuhlonza imodeli umenzi abafanele, kuhle kwegezi ekilasini.
Amanzi ukusetshenziswa ngesisekelo izifundo wonyaka.
Amandla ukusetshenziswa ngesisekelo nenkathi efanayo.
Ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo omiswe ilondolo.
Loading esiphezulu isigubhu (le ndlela ethile amakhilogremu).
Izinga umsindo imishini kule "Ukotini 60 degrees."
Ukuze abale isigaba energoeffektivnoti ngoba dryer, kubalulekile ukuba sicabangele izingubo dryer ngesikhathi umthwalo egcwele imishini. Ekuhloleni energoportrebleniya zibalwe ipharamitha - inani kWh ngalinye 1 kg ilondolo.
On the ilebula liqukethe ulwazi mayelana umkhiqizo futhi umkhiqizi, ikhodi alphanumeric ukuhlonza imodeli, ikilasi ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo.
Ukuze dryers zinezikhathi nemingcele:
ukusetshenziswa kwamandla kagesi ngesikhathi esinikeziwe;
Imodi yalesi imishini;
iphele isikhathi, lesi sici is kunakwe ngesikhathi umthwalo eligcwele;
Kuze kube 2010, imishini yokugeza izitsha, ukulinganisa ukusetshenziswa kwamandla, kwakudingekile ukuba acabangele amandla owenziwe kanye nokusebenza. Manje kwencazelo ekilasini kuhle kwegezi kuhilela ekubalweni 275 ukugeza nowe, nazo kunakwe kumodi yokulinda. yokugeza izitsha ngokuyikho kudle 462 kilowatts ngonyaka.
Amapharamitha isici zivumelana lolu hlobo ubuchwepheshe:
Amanzi ukusetshenziswa Ukubalwa 1 unyaka umsebenzi;
futhi uyakucabangela inani amasethi izitsha, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu indinganiso operation umjikelezo.
Ukuze ubone ukuthi isibani ngeka kuyo ekilasini kuhle kwegezi endlu Imishini, kubalulekile ukuba acabangele amandla aphele. Okulandelayo udinga uliqhathanisa nabazalwane incandescent ama ubudala.
Kuqala amakilasi izibani energy nekghono:
Incwadi A kuhlanganisa LED nezinhlobo Fluorescent, kanye nezibani ezithile Fluorescent nge flasks avaliwe.
Ikilasi kuhlanganisa Fluorescent ezithile ivaliwe flasks nezibani Halogen infrared.
Uma wokugubha ikhombisa incwadi C, kuba isibani Halogen nge Xenon.
Amakilasi D, E, F zihlanganisa ezihlukile Halogen.
I last - izibani incandescent. Bona sihambisana wokugubha kusukela E ukuze G.
Ihhovisi yaseNdlunkulu imishini ekhethekile. Amandla ikilasi kahle
Ngeshwa, akukho ithebula amakilasi of energy ukusetshenziswa, afaneleka ehhovisi ngalinye iyunithi. Lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi lolu hlobo ubuchwepheshe sokucabanga kwakuhluke kakhulu. Kulesi ezahlukene kukhona impela ukusabalala elikhulu nemingcele lobuchwepheshe kanye orientation umshini othile.
Indlela ukunquma ekilasini eyonga ugesi imishini ehhovisi? D Ukuze kuncishiswe kukagesi kubalulekile ukukhetha amamodeli samanje imishini ehhovisi. Isizukulwane ngasinye esisha ibusa ugesi kancane, kodwa ngenxa izici lobuchwepheshe bebakhulu imodeli ubudala. Ngokwesibonelo, Abaqaphi nge CRT kufanele zishintshwe ukuze yesimanje LED izikrini ukuthi kudla ugesi kude kancane.
ikhompyutha Energy ikilasi kahle kunzima ukunquma, ngoba incike imininingwane eminingi. Khumbula ukuthi udlala amanothibhuku Uzodla amandla okuningi kuka low-ekupheleni models. Kodwa lokhu akusho ukuthi izingxenye ezintsha futhi kuyabiza ngeke siphumelele futhi ethembekile.
Ikhompyutha ekilasini kuhle kwegezi buvezwa okuphakela amandla. Yingakho uhlelo isitifiketi lakhiwe ngabo. Ubani kunconywa ukuthenga amandla kagesi, equkethe wokugubha - 80 PLUS. Khumbula, ayanda value, i-kabanzi ngayo ukonga futhi enokwethenjelwa.
Uma ufuna ukukhetha amadivayisi Uzodla amandla kancane, kumele ayejwayele amakilasi eneji nekusebenta imishini ehhovisi. Yiqiniso, uma izinhlobo kudingekile akudingeki kophawu efanele, kungcono ukuba ukhethe indlela entsha. Kuvamise impela, ezinamandla futhi sisebenzisa amandla kancane. Ngokwesibonelo, uma ufuna sithathe iphrinta ke udinga ukubheka ithebula amakilasi energy ukusebenza kahle kwe-kwiphrinta. Ngakho, uyokwazi ukukhetha imodeli izinga.
Izinguquko Emculweni We-iPhone kusuka 1 kuya 7. Incazelo, umlando, izici kanye nokubuyekeza
Philips ngesitimu izingubo - umsizi jikelele endlini
"Burning" (umshini wokuwasha): ukubuyekeza amakhasimende futhi Ochwepheshe
Motor uxhumano ezintathu isigaba
Indlela ukukhetha abasha futhi lapho ukuthengisa imoto ibhethri ubudala e Moscow
Indlela ukubuyisela ekhaleni unomkhuhlane: amasu aphumelela
Imininingwane yokuthi ungashintsha kanjani iphasiwedi ku "Impi"
Imagination kanye ngokoqobo inhloso
Isignali kusuka engase sikulungele ukuba kuphilwe kuso iplanethi Gliese 581d
Dream Ukuhunyushwa: yini iphupho isikhova
Zingaki kilojoule ikhofi
Kungani ngiba umlayezo "Ayikwazi ukudala isithonjana" ohlelweni ifoni ye-Android?